ဂီတအွန်လိုင်း LOSSLESS နားထောင်ရန်လုပ်နည်း - အွန်လိုင်းန်ဆောင်မှုများ - 2019
အွန်လိုင်းဂီတ Lossless နားထောင်ခြင်း
ကိုလည်းကြည့်ပါ: တွစ်တာပေါ်မှာရှိသမျှ tweets ကလစ်၏စုံတွဲတစ်တွဲဖယ်ရှားပေးသည်
အားလုံးပလီကေးရှင်းကို desktop, မိုဘိုင်းနှင့်လူမှုကွန်ယက်: မလိုချင်တဲ့ Retweet ဖယ်ရှားပစ်ရန်စွမ်းရည်အားလုံးတွစ်တာ၏ဗားရှင်းအတွက်ထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိသည်။ ထို့အပြင်မိုက်ကရိုဘလော့ဂ်များဝန်ဆောင်မှုကိုသင်ပုန်းရှောင်ခြင်းနှင့်အခြားသူများရဲ့ Retweet ခွင့်ပြုပါတယ်။ ဒါဟာမဆိုပလက်ဖောင်းပေါ်က Twitter ပေါ်တွင် Retweet ဖယ်ရှားပစ်ရန်ဘယ်လိုဖြစ်တယ်, နောက်ထပ်ဆွေးနွေးတင်ပြပါလိမ့်မယ်။
တွစ်တာ၏ Browser-based ဗားရှင်း
တွစ်တာ၏ desktop version ကို - ဆဲလူမှုရေးကွန်ယက်၏လူကြိုက်အများဆုံး "လူ့ဇာတိ" ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လက်စွဲစာအုပ်ဖယ်ရှားရေး Retweet စတင်ပါလိမ့်မယ်။
စာမျက်နှာ၏အပေါ်ပိုင်းညာဘက်ထောင့်၌အကြှနျုပျတို့၏ကိုယ်ပွားအိုင်ကွန်ပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ, အဲဒီနောက် drop-down list ထဲမှာ, ပထမဦးဆုံးကို item ကို select - "Show ကိုပရိုဖိုင်း».
အခုတော့ Retweet ကိုရှာဖွေကျနော်တို့ဖယ်ရှားပစ်ရန်အလိုရှိ၏။
ဤရွေ့ကားအရက်ဆိုင်တံဆိပ်တပ်ထားပါသည် "သင် retvitnuli".
စက်ဝိုင်းနှစ်ခုအစိမ်းရောင်မြှားနှင့်အတူ icon ကို click ပါမှပဲ tweets ၏အောက်ခြေတွင်, သင့်ပရိုဖိုင်းကနေသက်ဆိုင်ရာ Retweet ပယ်ဖျက်ဖို့။
သင့်ရဲ့နှင့်သင့်နောက်လိုက် - ကြောင်းပြီးနောက်, Retweet သတင်း feeds ကနေဖျက်ပစ်နေပါတယ်။ သို့သော်တစ်ဦး tweet ထုတ်ဝေခဲ့သူအသုံးပြုသူရဲ့ပရိုဖိုင်းကိုမှတစ်ဦးမက်ဆေ့ခ်ျကိုဘယ်နေရာမှာမဆိုမသွားပါလိမ့်မယ်။
ကိုလည်းကြည့်ပါ: Twitter ပေါ်တွင်မိတ်ဆွေများကထည့်သွင်းဖို့ကိုဘယ်လို
ကိုယ့်အရေးယူ - Retweet ဖယ်ရှားရေးနားလည်သဘောပေါက်နိုင်ပါသည်။ ဤကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်းအတွက်မိုဘိုင်း device များအတွက်တွစ်တာ client ကဲ့သို့နီးပါးကျွန်တော်တို့ကိုသစ်ကိုဘာမျှမပူဇော်မထားဘူး။
လျှောက်လွှာအပြေး, အထက်လက်ဝဲဘက်ထောင့်၌အကြှနျုပျတို့၏ပရိုဖိုင်း၏ icon ကို click ပါနှင့်ဘေးထွက် menu ကိုသွားပါ။
ဤတွင်ကျနော်တို့ပထမဦးဆုံးကို item ကိုရွေးချယ်ပါ - "ကိုယ်ရေးဖိုင်".
အခုတော့ Twitter ကို၏ desktop ကိုဗားရှင်း၌ရှိသကဲ့သို့, ငါတို့ရုံ Retweet အတွက်ညာဘက်တိပ်ရှာဖွေနှစ်ခုမြှားနှင့်အတူအစိမ်းရောင် icon ကို click ပါဖို့လိုပါတယ်။
ဤအလုပ်ရပ်များ၏ရလဒ်အဖြစ်သင့်လျော်သော Retweet ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာပေစာရင်းထဲကဖျက်ပစ်ပါမည်။
သငျသညျပြီးသားမှတ်ချက်ပြုခဲ့ကြသကဲ့သို့, အဆုံး၌အတစ်ကို PC ပေါ်မှာဖယ်ရှားခြင်းနှင့် Retweet ၏လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်ဆင်းတဦးတည်းအရေးယူမှကြွလာ - function ကိုမှသက်ဆိုင်ရာအိုင်ကွန်ခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်း။
သင့်ကိုယ်ပိုင်ပရိုဖိုင်းကနေ Retweet ကိုဖျက်ပစ်ရန်အလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။ အညီအမျှ Uncomplicated လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အထူးသဖြင့်အသုံးပြုသူများထံမှ Retweet ပုန်းအောင်းနေသည်။ သင်မကြာခဏနောက်လိုက်စာပမြေားအလွန် Third-party တစ်ဦးချင်းစီနှင့်အတူ shared microblog ကိုဖတ်ရသောအခါဤသို့သောပြောင်းရွှေ့ခြင်းအားဖြင့်, နှုနျးဖို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်တစ်ဦးအထူးသဖြင့်အသုံးပြုသူများထံမှ Retweet ၏ display ကိုဖိနှိပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိပ်, သင်ပထမဦးဆုံးမြို့ပရိုဖိုင်းကိုသွားရပေမည်။
ထိုအခါသင်သည်နောက်တစ်နေ့ခလုတ်ကိုတစ်ဒေါင်လိုက်အစက်သုံးစက်၏ပုံစံအိုင်ကွန်ကိုရှာဖွေရန်လိုအပ်ပါတယ် "Read / ဖတ်» ထိုသို့အပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
အခုတော့ drop-down menu ကိုသာရွေးနိုင်သည် "Disable လုပ်ထား Retweet".
ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့တွစ်တာ-တိပ်အတွက်အသုံးပြုသူကိုရှေးခယျြအားလုံး Retweet ၏ display ကိုဖုံးကွယ်။